Qarax ka dhacay Degmada Maxaas oo uu ku dhintay Guddoomiye Ku Xigeenkii Degmada – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Qarax ka dhacay Degmada Maxaas oo uu ku dhintay Guddoomiye Ku Xigeenkii...
Qarax ka dhacay Degmada Maxaas oo uu ku dhintay Guddoomiye Ku Xigeenkii Degmada
Wararka naga soo gaaray Degmada Maxaas ee Gobolka Hiiraan ayaa sheegayo in qarax ka dhacay Maanta halkaasi lagu dilay Guddoomiye ku xigeenkii amniga iyo siyaasada degmadaas Cabdirashiid Cusmaan Carab.
Qaraxaas ayaa waxaa la sheegay in uu ahaa nooca Miinada dhulka lagu aaso,isla markaana waxaa uu ka dhacay bartamaha Degmada.
Qaraxa ayaa ka dhashay Khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Guddoomiye kuxgeenkii amniga iyo siyaasada Degmada Maxaas ayaa ku geeriyooday qaraxaas waxaana ku dhaawacmay laba Askari ,kuwaasi oo ku sugnaa Maxaas.
Kooxda Al-shabaab ayaa sheegtay Mas’uuliyada qaraxaas,iyagoo sheegay inay ku dileen Guddoomiye ku xigeenkii degmada Maxaas,Sarkaal Boolis iyo Ciidamo ilaala u ahaa.
Previous articleFaa’iidooyinka Caafimaad Ee Ay Leedahay Afakaadhadu
Next articleWafdi Ka Socda Dowladda Sacuudiga Oo Lagu Soo Dhaweeyay Magaalada Muqdisho
Madaxweyne Farmaajo oo u Duuley Ruushka